Kpop - The Geek Text
တရုတ်ကတော့ ဘီလျံနာသူဌေးမင်းသမီး Zhao Wei ကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကနေပယ်ဖျက်လိုက်ပါပီ
Copyright©2021 ကူးယူခြင်းလုံးဝခွင့်မပြုပါ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံးမင်းသမီးများထဲမှတစ် ဦး ကို အပြီးတိုင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး ဒီကိစ္စတွင် တရုတ်အစိုးရကနောက်ကွယ်မှရှိနေလိမ့်မည်ဟုယူဆထားကြပါတယ်၊ သူမမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ပရိတ်သတ်များရှိသလို ဘီလီယံပေါင်းများစွာလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘေကျင်းက မင်းသမီးZhao Wei ကို ရုပ်ရှင်သမိုင်းကနေ အပြီးတိုင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ မပြောပြထားပါဘူး၊ Zhao ရဲ့ နာမည်ဟာ ထပ်မံ မရှင်သန်နိုင်တော့ပါဘူး၊ အင်တာနက်ပေါ်က သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအားလုံး ဖျက်ချခံလိုက်ရပါတယ်၊ သူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ သူမပါဝင်တဲ့ show တွေအကုန်လုံး တရုတ် အွန်လိုင်းဝက်ဆိုဒ် တွေမှာ ဖျက်ချခံခဲ့ရပါတယ်၊ သူမကို အွန်လိုင်း ကြော်ငြာအဖြစ်နဲ့တောင်မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး၊ Zhao Wei at the Venice Film Festival on September 10, […]
Momoland အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ မင်းသမီး Yeonwoo ဘက်ကလဲ လီမင်ဟိုနဲ့ dating သတင်းကိုပြန်ငြင်း
Momoland အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ မင်းသမီး Yeonwoo ဘက်ကလဲ လီမင်ဟိုနဲ့ dating သတင်းကိုပြန်ငြင်း Copyright © 2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့် လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ Momoland အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ မင်းသမီး Yeonwoo ရဲ့ MLD Entertainment သည် မင်းသမီးဟာ Lee Min Ho နှင့်လတ်တလော ချိန်းတွေ့နေတယ် လို့ အခိုင်အမာ‌ ပြောဆိုသောအစောပိုင်းကောလာဟလများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့်တရားဝင်ကြေငြာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် MLD Entertainment ရဲ့ အဆိုအရ “Yeonwoo သည်သူမရဲ့ ရိုက်ကွင်းအချိန်ဇယားများကိုတက်ရောက်ရန် အလုပ်များနေသောကြောင့်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ရန်နှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်၊Yeonwoo နှင့်အတည်ပြုပြီးနောက်ချိန်းတွေ့မှုကောလာဟလသည်မမှန်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည် စီနီယာ ဂျူနီယာ ဆက်ဆံရေးအနေနဲ့သာ ရင်းနှီးကြပါတယ်” လို့ သိရပါတယ်၊ Lee Min Ho ရဲ့အေဂျင်စီ MYM Entertainment […]
Momoland အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Yeonwooနဲ့ ချိန်းတွေ့နေတယ်လို့ ကောလဟာလများ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ Lee Min Ho ဟာ Quarantineစည်းမျည်းများကို ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ ထပ်မံစွပ်စွဲခံရပါတယ်၊ News1ရဲ့ အဆိုအရ Lee Min Ho အေဂျင်စီ MYM Entertainmentရဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးက ရှင်းပြခဲ့ပြီး မင်းသားဟာ Quarantine စည်းမျည်းများကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကိုလည်းငြင်းဆိုထားပါတယ်၊တာဝန်ရှိသူက “ Lee Min Ho ဟာ Yeonwooအပါအဝင် လူသုံးယောက်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံသို့ သွားခဲ့ပြီး ဇူလိုင် လ1ရက်နေ့တွင် ပြန်လာခဲ့တယ်” လို့ရှင်းပြထားပါတယ်၊ MYM Entertainmentက “ထိုဓာတ်ပုံဟာ ဇူလိုင်လ 1ရက်နေ့ကပုံဖြစ်ပြီး ကားရဲ့တဖက်တွင် တခြားသူတွေလည်း ထိုင်နေပါတယ်၊အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက လူလေးဦးသာ ရှိကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုပြီးပါပြီ၊ဒါ့ကြောင့် မင်းသားဟာ Quarantineစည်းမျည်းကို မချိုးဖောက်ပါဘူး […]
တရားမဝင်ပြည့်တန်ဆာအမှုအတွက် ‌ထောင်ဒဏ် 3နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ BigBangအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Seungri
August 15, 2021 August 29, 2021 adminLeaveaComment on တရားမဝင်ပြည့်တန်ဆာအမှုအတွက် ‌ထောင်ဒဏ် 3နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ BigBangအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Seungri
တရားမဝင်ပြည့်တန်ဆာအမှုအတွက် ‌ထောင်ဒဏ် 3နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ BigBangအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Seungri Arkarta.com Copyright © 2021 ကူးယူ ဖော်ပြခွင့် လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။ တောင်ကိုရီးယား ဆိုလ်းမြို့ စစ်ခုံရုံးကနေ Bigbangအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Seungri အား တရားမဝင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း၌ပါဝင်ပတ်သက်နေသော အမှု့ကြောင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ကျခံစေရန် ကြာသပတေးနေ့က အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်၊ဒါ့အပြင် သူဟာ ကိုရီးယားငွေ 1.15 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ989000)ကိုလည်း ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်၊ ဆိုးလ်မြို့ အနီး နားက Yongin မြို့ စစ်ခုံရုံးမှာ စီရင်ချက်ချမှတ်ပြီး အချုပ်ခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်၊ Lee Seung Hyun ခေါ် Seungriဟာ 2020 Januaryလကတည်းက 2015-2016ကာလအတွင်း ထိုင်ဝမ်၊ဂျပန်၊ဟောင်ကောင်မြို့ကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် တရားမဝင် […]
BTS V နှင့်သူ၏တရုတ် fan များထံမှာထူးခြားသော လက်ဆောင်
December 27, 2020 adminLeaveaComment on BTS V နှင့်သူ၏တရုတ် fan များထံမှာထူးခြားသော လက်ဆောင်
BTS V နှင့်သူ၏တရုတ် fan များထံမှာထူးခြားသော လက်ဆောင်.. ဒီဇင်ဘာလတွင် Army များသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း BTS V ၏ fanများထံမှ ထူးခြားဆန်းသစ်ကာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမွေးနေ့အစီအစဉ်များကို တွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ထားကာ BTS အသင်းဝင်များအားလုံးက နှစ်များတစ်လျှောက်ပရိသတ်များထံမှအလွန်များပြားလှသောဆုလက်ဆောင်များကိုရရှိခဲ့သော်လည်း V ၏တရုတ် fanbase @KIMTAEHYUNGBAR_ သည် ပြီးပြည့်စုံသော “first of its kind” မွေးနေ့စီမံကိန်းများဖြင့် တစ်ခြားသူများထက် ပိုသာနေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်ရှစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားသည့် Burj Khalifa ပေါ်တွင် V၏ပုံကို တင်ခြင်းဖြင့် fan များရဲ့ အားပေးမှုမြင့်တတ်ခဲ့ပါသည်။ မိုးမျှော်တိုက်ပေါ်တွင် ၃ မိနစ်ကြာပြသမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၆၈K နီးပါးခန့်ကုန်ကျပြီး”First idol with individual ad on Burj Khalifa” ဖြစ်လာရန် […]
Hangout with Yoo၏အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁.၆သန်းလှူဒါန်းမှု
December 26, 2020 adminLeaveaComment on Hangout with Yoo၏အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁.၆သန်းလှူဒါန်းမှု
‘ Hangout with Yoo ‘၏အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁.၆ သန်းလှူဒါန်းမှု.. ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် MBC ၏ variety show ဖြစ်သော ‘Hangout with Yoo’ မှ ထုတ်လုပ်ရေး၀န်ထမ်းများနှင့်သရုပ်ဆောင်များက ငွေကြေးလိုအပ်နေသောအဖွဲ့အစည်း (၁၀) ခုအားလှူဒါန်းသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပြီး.. Yoosanseul, SSAK3 နှင့် Refund Sisters ကဲ့သို့သော စီမံကိန်းလှုပ်ရှားမှုများမှရရှိသည့် အမြတ်အစွန်းများကိုလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကာ လှူဒါန်းခဲ့သောပမာဏသည်₩ ၁.၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ သန်းခန့်) ရှိကာ.. Yoosanseul နှင့် Song Gain ၏“ The Farewell Bus Stop”၊ Sagging Snail ၏“ As I Say (2020 […]
BLACKPINKရဲ့2021 Season’s Greetingsဓါတ်ပုံများ
December 26, 2020 adminLeaveaComment on BLACKPINKရဲ့2021 Season’s Greetingsဓါတ်ပုံများ
BLACKPINK ရဲ့ “2021 Season’s Greetings” ဓါတ်ပုံများ… BLACKPINK သည် “2021 Season’s Greetings” ၏အံ့အားသင့်စရာစီးရီးကိုခရစ်စမတ်အတွက် ပရိသတ်များအားလက်ဆောင်အနေဖြင့် ချပြခဲ့ပါတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေဟာချစ်ဖို့ကောင်းသော accessorie များနှင့် အလှဆင်ယင်ဆင်ယင်ထားသော ဝတ်စုံများကို အရောင်လေးရောင်ဖြင့် နတ်သမီးလေးပါးသဖွယ် ပြသခဲ့ပါတာပါ။ Roseက သစ်တောနတ်သမီးကဲ့သို့ လှပစိမ်းလန်းသောအရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပြသနေစဥ် … Jennieက သူမ၏ ရဲရဲနီနေသော အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ဆွဲဆောင်ဝံ့ကြွားစွာထွက်ပေါ်လာပြီး.. Lisa ကသူမရဲ့ထင်ရှားတဲ့ Vibe ကိုကြီးမားတဲ့ပန်းရောင်အတောင်ပံတွေနဲ့ပြသခဲ့ကာ.. Jisoo ကတော့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အဖြူရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ပါသည်။ BLACKPINK ၏ ‘2021 Season’s Greeting’ ဓာတ်ပုံများသည် လက်ရှိတွင်ကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်နေပြီး ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်၊ မိတ်ကပ်နှင့်ပုံစံတို့ကအစ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ဓာတ်ပုံများသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကာ ပို၍လည်းအဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။ […]
December 25, 2020 adminLeaveaComment on IUရဲ့2020အတွင်း1billionနီးပါးရှိသောအလှူအဒါန်းများ
IU ရဲ့ 2020 အတွင်း 1 billion နီးပါးရှိသော အလှူအဒါန်းများ… IU ကလုံးဝနတ်သမီးလေးတစ်ပါးပဲ.. ယခုလ ကလေးသူငယ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကို အလှူငွေမြောက်များစွာ လှူဒါန်းပြီးသည့်နောက်ပရဟိတလုပ်ငန်းရှင် တစ်ကိုယ်တော်ကြယ်ပွင့်လေးဖြစ်တဲ့ IU က ၂၀၂၀ နှစ်အတွင်း KRW ဘီလီယံ ၁ ဒသမ ၁၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀၃၀၀၀ ခန့်) လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ COVID-19 ကိုတိုက်ခိုက်နေသည့်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများသို့လည်း ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှစ၍ လှူဒါန်းမှုနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးသည်။ Good neighbors သို့ KRW သန်း ၁၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀,၃၀၀ ခန့်) နှင့်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးအသင်းသို့ နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၁၀၀ KRW (ဒေါ်လာ ၉၀၃၀၀ ဒေါ်လာ) ပို့ခဲ့ပြီး.. နောက်လတွင် တောင်ကိုရီးယားရှိခရိုင်များဖြစ်သော Seocho နှင့် Gwacheon သို့ […]
BLACKPINKအဖွဲ့ဝင်RoseမှGirls’ dayအဖွဲ့ဝင်Hyeri ရဲ့ရိုက်ကူးရေးသို့ပေးပို့ခဲ့သောsuprise gift
December 24, 2020 adminLeaveaComment on BLACKPINKအဖွဲ့ဝင်RoseမှGirls’ dayအဖွဲ့ဝင်Hyeri ရဲ့ရိုက်ကူးရေးသို့ပေးပို့ခဲ့သောsuprise gift
သူမတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဥ်က တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ… Hyeri သည်သူမကို Christmas အကြိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ခဲ့သော suprise gift နဲ့ပတ်သက်ပြီး BLACKPINK’s Roséအား ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်။ Hyeri သည် ၂၀၂၁ အစောပိုင်းတွင်ထွက်ရှိမည့် Frightening Cohabitation ဒရာမာကိုရိုက်ကူးနေစဥ် Roséက Hyeri အတွက် သရေစာထရပ်ကားတစ်စီးပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ ထရပ်ကားတွင် Hyeri ရဲ့ပုံနှစ်ပုံနှင့် ပန်းရောင် banner လည်းပါရှိကာထိုbannerပေါ်မှာ သူငယ်ချင်း Hyeri အတွက် Rose မှမေတ္တာနဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေတဲ့စာမျိုးရေးသားခဲ့ပါသေးသည်။ “ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ငါတို့ရဲ့အရမ်းလှတဲ့ Hyeri လေးက သန်သန်မာမာနေနော်.. Frightening Cohabitation အတွက် ရှေ့ဆက်ကြစို့.. မင်းကအစားအရမ်းကြီးတယ်..churro တွေကိုတစ်ကြိမ်ထဲနဲ့အကုန်မစားနဲ့နော်..ဟုတ်ပြီလား..? သောက်စရာပူပူလေးသောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဦး..နင့်ကိုချစ်တယ်..”Rosé တုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့် Hyeri ကသူမရဲ့ snack truck နှင့်ဓာတ်ပုံများစွာရိုက်ပြီး […]
December 24, 2020 adminLeaveaComment on Netizensများရဲ့မျက်လုံးများINFINITE Lရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောခန္ဓာကိုယ်စီရောက်ရှိ
Netizens များကတော့ INFINITE L ရဲ့ ပြည့်စုံလှသောအသစ်စက်စက်ခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့ အာရုံရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ Lဟာ KBS2ရဲ့ Secret Royal Inspector ၏ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ကြည့်ရှုသူများကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စီးရီးသည်ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ပြန်လည်ပြသခဲ့၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သောဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Lရဲ့ရေချိုးကန်ထဲရှိဇာတ်ဝင်ခန်းဟာဆိုရင် ကြည့်ရှုသူများအားအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုမြင်ကွင်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေသော INFINITE ရဲ့ပရိသတ်များကိုယိမ်းယိုင်စေခဲ့သည်။ L သည်သူ၏ရှင်းလင်းသော အပေါ်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုကင်မရာရှေ့တွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကာ လူအများကလည်းဤသည်မှာ L ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကတည်းက အလွန်အရေးပါစေတဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကလည်း မှတ်ချက်များ ပေးခဲ့ကြပါသေးသည်။ “သူဘယ်အချိန်မှာရိုက်ကူးခဲ့တာလဲ..” “ဒီမျက်နှာနဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ အရာအားလုံးကိုရသွားပြီပေါ့..” “နှစ်တွေကြာသွားတာတောင် ချောမောနေတုန်းပဲ..” “အဲဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်နှာ .. ? Daebak .. “ “ငါ၇နှစ်လောက်ရဲစိတ်တင်ခဲ့ပြီးပြီ.. […]